Faits-Divers – Page 878 – Midi Madagasikara
Andohan’i Mandroseza : Miaramila hita faty toa anaty rano
Omaly maraina no nisy nanatitra teny amin’ny tranom-paty HJRA ny fatina miaramila iray fantatra fa maty tao anaty rano teny Andohan’i Mandroseza. Rehefa nojerena ny razana dia tsy nahitana ratra mivantana. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa ankeviny efa tamin’ny alin’ny sabotsy no lasa tao anaty rano ity olona ity. Ny marina anefa voa nisy nahita…
Analakely: Huit détrousseurs arrêtés, avant hier
Ils étaient pris en flagrant délit de vol à la tire. Au nombre de huit, ils se départagent en groupe et en secteur. Aux alentours de la BNI à Andohan’analakely, une femme a eu son sac arraché par deux individus. Le premier fait diversion et la seconde passe à l’action. En deux temps et trois…
Miarinarivo: Nirefodrefotra ny basy, voatifitra teo amin’ny kibony ny tompon-trano
Nisehoana fanafihan-jiolahy mahery vaika indray tamin’iny faritr’Itasy iny ny alakamisy hifoha zoma lasa teo. Nirefotra teo amin’ny in-telo teo ny basy. Nanao amboletra tao amin’ny tokantranona mpivarotra iray tao amin’ny tanàna, antsoina hoe Mahabo, kaominina Tianarivo, distrikan’i Miarinarivo, ny jiolahy miisa telo. Basy vita gasy no nentin’ireto malaso ireto nanafika, raha ny voalazan’ny mpitandro filaminana.…
# – Ankorondrano. Moto iray indray voafandriky ny lavaka. Omaly tokony ho tamin’ny 8 ora alina, moto iray indray no nianjera teo amin’ilay lavaka eo afovoan’ny lalana eny Ankorondrano. Nitrosona tamin’ny tany ilay lehilahy ary nisy naratra teo amin’ny sandriny. Tsy nisy fahasimbana kosa anefa ny moto nentiny. Na dia efa notsentsena aza io lavaka…
Fenoarivo Atsinana: Fanapotehana ny biraon’ny JIRAMA, olona 3 nosamborina
Taorian’ny nanapotehan’ny olona ny biraon’ny JIRAMA tany Fenoarivo Atsinana dia fantatra izao fa olona telo no nosamborin’ny mpitandro filaminana tany, omaly. Hampangaina izy ireo fa nandoro sy nanimba fananan’olona. Ny alin’ny alakamisy tokony ho tamin’ny 8 ora, tonga marobe teny amin’ny biraon’ny JIRAMA ny olona nentin-katezerana ary nilaza fa leon’ny fahatapahan’ny jiro matetika miseho. Tamin’izao…
Voasambotra i Patrick E., mpanolana ankizilahy
Anosibe: Omeny fanafody fampatoriana ireo ankizy avy eo aolany. Lehilahy iray manodidina ny 35 taona teo ho eo, fantatra amin’ny anarana hoe Patrick E. no saron’ny pôlisy misahana ny zaza tsy ampy taona teny Anosy, ny alakamisy maraina lasa teo, teny Namontana Anosibe. Araka ny fantatra dia ankizilahy mpiara-matory aminy maromaro no efa naolan’ity lehilahy…
Renivohitra: Olona dimy hita faty tanatin’ny herinandro
Vao niantomboka ity volana desambra ity dia efa voasantatra sahady tamin’ny fisiana fatin’olona hitan’ireo fokonolona etsy sy eroa. Ny alahady lasa teo dia vatana mangatsiaka olona roa be izao no hitan’ny fokonolona. Ny iray tany Ambohitrimanjaka, izay vehivavy voalaza fa nisy namono ary efa tsy mitafy intsony ny tapany ambany. Potika ny molony ambony ary…
← Previous 1 … 877 878 879 … 1 104 Next →